Maalinta Afrika oo lagu maamuusay dalka Kuwayt + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maalinta Afrika oo lagu maamuusay dalka Kuwayt + Sawirro
Maalinta Afrika oo lagu maamuusay dalka Kuwayt + Sawirro
(Kuwayt) 02 Nof 2018 – Xaflad si-heersaye ah loo so agaasimay ayaa lagu qabtey Dalka Kuwait ujeedka ayaa ahaa mid lagu weyneynaayo Maalinta Africa, waxaa ka soo qeybgalay Madax ka socota Dowladda Kuwiat, Danjirayaasha Caalamka u fadhiya Dalka Kuwiat, Ururadda Adduunka iyo dhamaan Jaaliyadaha Dalalka Africa ee ku nool Kuwait.
Ugu horeyn waxaa Munaasabadda loogu dabaal dagaayay Maalinta Africa khudbad ka jrrdiyey Madaxda Danjirayaasha ee ku sugan Kuwait kuwaas oo dhamaantood ku celceliyeen in ay Afrika ku socoto Wadadda Horumarka iyo Xalinta dhibaatada Africa u khaaska ah iyagoo tusaale u soo qaatey Doorka Ciidamada Africa ee Soomaaliya ee gacanta siinaya Ciidamada Soomaaliya.
Dhanka kale waxaa halkaas lagu soo bandhig bandhig dhaqameed ka tarjumayay Dowladaha Africa iyadoo Soomaaliyana ay doorkeeda ka cayaartay bandhig dhaqameedkaasi.
Siihaya Safaaradda Soomaaliya Dalkaa Kuwait Abiib Muusa Faarax oo hor kacayey Madaxdii iyo marti sharaftii kasoo qeyb qashey ayaa kormeer guud ku sameeyay bandhig dhaqameedkii ay soo bandhigeen dhamaan Dowladaha.
Previous articleDAAWO: Madaxkuti nolosha ku cunay Yeey jeer ay booqdayaal yaabbani daawanayaan (Muuqaal naxdin leh)
Next articleHilib-Ariga oo laga sheegay arrin Soomaalida ka farxinaysa!!